Dheuteronomi 3 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
3 “Zvino takatendeuka, tikaenda nenzira yokuBhashani. Ogi+ mambo weBhashani akabuda, iye nevanhu vake vose, kuzorwa nesu kuEdrei.+ 2 Naizvozvo Jehovha akati kwandiri, ‘Usamutya,+ nokuti ndichamuisa muruoko rwako, iye nevanhu vake vose nenyika yake; umuitire sezvawakaitira Sihoni+ mambo wevaAmori, aigara muHeshbhoni.’ 3 Naizvozvo Jehovha Mwari wedu akaisawo Ogi mambo weBhashani nevanhu vake vose mumaoko edu, tikaramba tichimurwisa kusvikira asisina kana akapona.+ 4 Panguva iyoyo chaiyo takatora maguta ake ose. Hapana taundi ratisina kuvatorera, maguta makumi matanhatu,+ nharaunda yose yeAgobhu,+ umambo hwaOgi aiva muBhashani.+ 5 Ose aya aiva maguta akanga akavakirirwa norusvingo rurefu, masuo nemizariro, tisingabatanidzi mataundi mazhinji kwazvo okumaruwa. 6 Zvisinei, takaaparadza chose,+ sezvatakanga taita kuna Sihoni mambo weHeshbhoni, patakaparadza chose maguta ose, varume, vakadzi, nevana vaduku.+ 7 Takatora zvipfuwo zvose nezvinhu zvakapambwa mumaguta acho kuti zvive zvinhu zvedu zvatakapamba.+ 8 “Panguva iyoyo chaiyo takatora nyika mumaoko emadzimambo maviri evaAmori+ aiva munzvimbo yaJodhani, kubvira kumupata une rukova weAnoni+ kusvikira kuGomo reHemoni;+ 9 (vaSidhoni vaishevedza Hemoni kuti Siriyoni,+ uye vaAmori vairishevedza kuti Seniri,)+ 10 maguta ose enyika yakati sandara neGiriyedhi yose neBhashani yose kusvikira kuSareka+ neEdrei,+ maguta oumambo hwaOgi aiva muBhashani. 11 Nokuti Ogi chete, mambo weBhashani ndiye akasara pane vakanga vasara pavaRefaimu.+ Tarirai! Hwanyanza hwake hwaiva hwanyanza hwesimbi. Hahusi muRabha+ revanakomana vaAmoni here? Hwakanga hwakareba makubhiti mapfumbamwe, uye hwakafara makubhiti mana, kana tichienzanisa nekubhiti romunhu. 12 Panguva iyoyo chaiyo takatora nyika iyi kuti ive yedu; kubvira kuAroeri,+ riri pedyo nomupata une rukova weAnoni, nehafu yenharaunda ine makomo yeGiriyedhi, uye ndakapa vaRubheni nevaGadhi maguta aro.+ 13 Nzvimbo yose yeGiriyedhi+ neBhashani+ yose youmambo hwaOgi ndakaipa hafu yedzinza raManase. Nharaunda yose yeAgobhu+ yeBhashani yose, hainzi nyika yevaRefaimu+ here? 14 “Jairi+ mwanakomana waManase akatora nharaunda yose yeAgobhu+ kusvikira kumuganhu wevaGeshuri+ nevaMaakati,+ akatumidza misha iyoyo yeBhashani zita rake rokuti Havhoti-jairi,+ kusvikira nhasi. 15 Makiri+ ndakamupa Giriyedhi.+ 16 VaRubheni+ nevaGadhi ndakavapa kubvira kuGiriyedhi+ kusvikira kumupata une rukova weAnoni, pakati pomupata wacho pari pamuganhu, kusvikira kuJabhoki, mupata une rukova uri muganhu wevanakomana vaAmoni;+ 17 uye Arabha naJodhani nomuganhu wacho, kubvira kuKinereti+ kusvikira kugungwa reArabha, Gungwa roMunyu,+ riri mujinga menzvimbo dzakatenuka dzePisga+ nechokunobuda zuva. 18 “Naizvozvo panguva iyoyo chaiyo ndakakurayirai, ndichiti, ‘Jehovha Mwari wenyu akupai nyika ino kuti ive yenyu. Muchayambuka, makagadzirira kurwa, muri pamberi pehama dzenyu, ivo vanakomana vaIsraeri, varume vose vakashinga.+ 19 Madzimai enyu nevana venyu nezvipfuwo zvenyu (ndinonyatsoziva kuti mune zvipfuwo zvizhinji) ndizvo chete zvicharamba zvichigara mumaguta enyu andakakupai,+ 20 kusvikira Jehovha apa hama dzenyu zororo, sezvamakaitwa, uye ivowo vaita kuti nyika yavachapiwa naJehovha Mwari wenyu mhiri kwaJodhani ive yavo; mozodzoka henyu, mumwe nomumwe kunhaka yake yandakakupai.’+ 21 “Zvino panguva iyoyo chaiyo ndakarayira Joshua,+ ndichiti, ‘Maziso enyu ari kuona zvose zvakaitirwa madzimambo maviri aya naJehovha Mwari wenyu. Jehovha achaita saizvozvowo kuumambo hwose hwamuchayambukira kwahuri.+ 22 Musavatya, nokuti Jehovha Mwari wenyu Ndiye achakurwirai.’+ 23 “Zvino panguva iyoyo chaiyo ndakateterera kuti ndinzwirwe nyasha naJehovha, ndichiti, 24 ‘Haiwa Changamire Ishe Jehovha, imi ndimi makatanga kuita kuti mushumiri wenyu aone ukuru+ hwenyu noruoko rwenyu rune simba,+ nokuti ndiani mwari ari kumatenga kana kuti ari panyika, anoita mabasa akaita seenyu nezvinhu zvesimba zvakaita sezvenyu?+ 25 Ndapota, ndibvumirei henyu kuti ndiyambuke, ndione nyika yakanaka+ iri mhiri kwaJodhani, nharaunda iyi yakanaka ine makomo+ pamwe chete neRebhanoni.’+ 26 Jehovha akaramba akanditsamwira kwazvo nokuda kwenyu+ uye haana kunditeerera; asi Jehovha akati kwandiri, ‘Zvakwana! Usazombotaurazve neni nezvenyaya iyi. 27 Kwira pamusoro pePisga,+ utarire kumavirira nokuchamhembe nokumaodzanyemba nokumabvazuva uone nemaziso ako, nokuti hauzoyambuki rwizi rwaJodhani urwu.+ 28 Rayira+ Joshua, umukurudzire uye umusimbise, nokuti ndiye achayambuka+ ari pamberi pevanhu ava uye ndiye achaita kuti vagare nhaka nyika yauchaona.’+ 29 Panguva yose iyi takanga tichigara mumupata uri pakatarisana neBheti-peori.+